Google dia nahazo an'i Fitbit miloka amin'ny Wear OS | Androidsis
Google mividy Fitbit amin'ny $ 2.100 miliara
Nahazo tsaho isika andro lasa izay, saingy farany nividy Fitbit tamin'ny $ 2.100 tapitrisa i Google. Fahazoana lehibe iray izay hiteraka ny G lehibe eo amin'ny tsenan'ny entina anaovana orinasa iray izay afaka nandefa vokatra avo lenta nandritra ny taona maro.
Google dia mametraka izay hapetraka miloka malalaka amin'ny Wear OS ary noho izany dia ataovy sarotra kokoa amin'ny Apple ny fahazoana ny Fibit. Fitbit izay manana katalaogin'ny vokatra marobe, na fehin-tànana marani-tsaina na famantaranandro.
Rick Osterloh, filoha lefitra ambony an'ny Google an'ny Devices and Services, dia nanambara avy amin'ny bilaogin'i Google:
Nandritra ny taona maro dia nanao fandrosoana lehibe i Google miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny habakabaka Wear OS sy Google Fit, fa izahay kosa mahita fotoana tsara hampiasana vola bebe kokoa amin'ny Wear OS ary koa ny fampidirana ireo fitaovana azo ampitaina Namboarin'i Google tamin'ny tsena. Fitbit dia mpisava lalana amin'ny indostria ary dia namorona vokatra, traikefa tena mahomby ary vondron'olona mpampiasa mavitrika. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny ekipa manam-pahaizana an'i Fitbit, sy ny fampiarahana ny AI, rindrambaiko ary fitaovana tsara indrindra, afaka manampy amin'ny fanavaozana bebe kokoa amin'ny akanjo azo anaovana sy manao vokatra mahasoa ny olona maro manerantany isika.
Efa ireo andro lasa izay dia nivoaka ny tatitra fa Google no tao ambadiky ny fahazoana an'i Fitbit ary inona Izy io dia hetsika mihetsika lehibe izay hanala betsaka amin'ny solaitrabe ny fitafiana manerantany. Wear OS izay tsy nahavita tsara tato anatin'ny taona vitsivitsy ary ny fahazoana Fitbit dia mety ho alohan'ny sy aorian'ny vokatra tsara.
Miandry fotsiny isika izao hahita inona no ho fitafiana fitafy manaraka izay nataon'i Fitbit amin'ny tanan'i Google amin'ny izay ho filokana lehibe mandritra ny taona vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google mividy Fitbit amin'ny $ 2.100 miliara
Ny rindranasa hitantanana ny Android anay amin'ny Windows, Companion an'ny telefaoninao, dia manafoana ny fanohanan'ny Bluetooth